Laser umsiki, Laser engumkroli, Cnc Laser umsiki - Mingjue
Max 20W Cover Full Fibre Laser Machine lokuMakishela ...
Umatshini wokumakisha we-Fiber Laser wokudibanisa
50W Raycus yahlulwe Fibre Laser Ukumakishwa Machine ...
Raycus 30W IKhabhinethi Fibre Laser Ukumakishwa Machine ...
I-55 x 35-1 / 2 yee-intshi i-130W i-CO2 Laser Engraver kunye ...
I-Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD yinkampani yokuDibanisa kunye noRhwebo eyakhiwe ngo-2016. Sisebenza kunye nee-manufactories ezintathu eziphezulu ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kwihlabathi. Ukusukela ukuba inkampani yamiselwa, sisebenze nzima ukuba ibe yinkokeli kwimveliso ye-laser, nokukrola nokumakisha. Singabantu abatsha. Singabasombululi beengxaki. Sizimisele ukuyila nokubonelela ngeenkqubo ezikumgangatho ophezulu we-laser kwihlabathi.
Inyathelo 1: Umba wokuqala yinkxaso. Kuninzi ukungenisa okungabizi kakhulu, ikakhulu okuvela eChina, kwintengiso. Kodwa ii-lasers ngoomatshini abanzima kwaye bayaphula kwaye bafuna ukulungiswa. Qinisekisa ukuba ...
I-Laserartist CO2 oomatshini bokukrola i-laser banikezela ngeendlela ezahlukeneyo. Eyona nto ibhetyebhetye kune-engravers yomatshini okanye oomatshini bokugaya, ii-laser ze-CO2 zinokukhawulezisa ngokukhawuleza nangokulula ...
Ukusebenza komatshini wokumakisha we-laser kuya kuncipha kancinci emva kokuba kusetyenziswe ixesha elide. Ibangelwa yintoni le nto? Zeziphi izinto eziphambili ezichaphazela umgangatho wokumakisha umatshini we-laser ...
Kwiminyaka eyadlulayo, umatshini laser, nokukrola unako ukwenza kuphela nokukrola ifomathi encinci ngenxa yokusikelwa umda zobugcisa. Ngohlaziyo oluqhubekayo kunye nophuhliso lwetekhnoloji, ulawulo lwebhodi yomama ...